China Vetikal nnukwu ike 808 755 1064 mbuaha ebili mmiri nke ọkachamara soprano ice diode laser mwepụ DY-DL501 Manufacture and Factory | Danye
Dị ka ihe ngwọta agbakwunyere, Eos-ice platform jikọtara uru nke ogologo 3 niile, na-enweta nsonaazụ magburu onwe ya na usoro ọ bụla nke ntụgharị ihu igwe nke aka ya
Maka ụdị ntutu na agba.
Ogologo Alexandrite na-enye ike itinye ume dị ike karị site na melanin chromophore, na-eme ka ọ dị mma maka ụdị ntutu dị iche iche na agba - ọkachasị ntutu na ntutu dị nro. Site na ịbanye elu, 755nm wavelength lekwasịrị Bulge nke ntutu anya ma ọ kachasị dị irè maka ntutu agbakwunyere agbakwunye na nku anya na egbugbere ọnụ elu.(2) ỌR 80 808NM WAVELENGTH
Ọkara usoro ọgwụgwọ
Ogologo oge ochie dị na mwepụ ntutu laser, ogologo ntụgharị 808nm, na-enye ntinye miri emi nke ntutu isi na ike dị elu, ọnụego ugboro ugboro na nnukwu ntụpọ maka ọgwụgwọ ngwa ngwa. 808nm nwere ogo imirikiti imi ahụ melanin na-eme ka ọ dị mma maka ụdị anụ ahụ gbara ọchịchịrị. Ike omimi ya nwere ike ime ka Bulge na Bulb nke ntutu isi ebe ọ bụ na ọ dị omimi nke na-eme ka ọ dị mma maka ịgwọ ogwe aka, ụkwụ, agba na ajị agba.
Pụrụ iche maka ọchịchịrị akpụkpọ ụdị.
A na-ahụ ogologo ntụgharị YAG 1064 site na ịmịnye melanin dị ala, na-eme ka ọ bụrụ azịza maka uche maka ụdị anụ ahụ gbara ọchịchịrị. N'otu oge ahụ, 1064nm na-enye ihe omimi miri emi nke ntutu isi, na-enye ya ohere ịdabere na Bulb na Papilla, yana ịgwọ ntutu miri emi dị na isi dịka isi, ogwe aka na ebe obibi. N'iji mmiri dị elu nke na-eme ka ọnọdụ dị elu dị elu, ntinye nke 1064nm wavelength na-eme ka profaịlụ ọkụ nke ọgwụgwọ laser zuru ezu maka iwepụ ntutu kachasị dị irè.
Erdị laser Germany Diode laser
Obosara usu 80-200ms (Max.350ms dị)
Nke gara aga: 2020 NEW 360 Cryolipolysis agba na ahu slimming DY-Magia3
Osote: Portable 808 755 1064 mbuaha mmiri na ebili mmiri nke ọkachamara diode laser mwepụ igwe DY-DL1A
ROHS kwadoro mma iwepu ntutu 755 808 1064 ...
Lonlọ Mmanya kwadoro ihu ọma atọ na-agwakọta iode ...